October 2013 ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
Icon တွေကိုပြောင်းလဲ အသုံးပြုရတာကို ကြိုက်သူတွေအတွက် MOND- Nova/Apex/GO/Solo Icon v1.0.8 Apk
10:23:00 am ကွန်ပျူတာနည်းပညာ No comments
Android phone တွေမှာ launcher တွေပြောင်းလဲ အသုံးပြုပြီးတော့ icon တွေကိုပါလန်းတာလေးတွေပြောင်းချင်တဲ့ သူတွေအတွက်Launcher တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ icon လေးတွေကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ application လေးပါ။ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ launcher တွေရဲ့ icon တွေကတော့ Nova,Apex,Go, Solo Launcher တွေရဲ့ icon တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ တော့ icon တွေအနေနဲ့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်အုံးမှာပဲဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းထပ်မံထုတ်လုပ်မဲ့ version တွေမှာတော့ icon ပေါင်း 220 ကျော် အပြင် widget တွေကိုလည်းထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ application ရဲ့ information အရသိရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ icon အတွေကိုပဲ ပြောင်းလဲ အသုံးပြု နိုင်အုံးမှာပါ။ ဒီ application လေးကို android version 2.1 နဲ့အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Driver Fusion 1.7.0.0 Premium (Drivers ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်)
8:57:00 am Driver No comments
Driver Fusion ကတော့ PC ကွန်ပြူတာတွေအတွက် Drivers ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်... ကွန်ပြူတာထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ Drivers အဟောင်းတွေ ထပ်နေတဲ့ Drivers တွေကို ရှင်းသွားအောင် လွယ်ကူစွာနဲ့ uninstall လုပ်ပေးနိုင်တယ်... ပြီးတော့ မိမိကွန်ပြူတာ အလုပ်လုပ်တာ မြန်ဆန်အောင် Uninstall လုပ်ပြီးတော့ စက်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ directories, registry entries တွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးတယ်... စက်ထဲကို Drivers အသစ်တခုမသွင်းခင် ရှိပြီးသား system နဲ့ မကိုက်ညီတော့တဲ့ drivers အဟောင်းတွေကို အလိုအလျောက် ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် Drivers တွေ conflict မဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ကွန်ပြူတာ performance ကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်... ကောင်းတာတွေတော့ အများကြီးပါပဲ....
Xp/Vista/7/8 တွေကို support လုပ်ပါတယ်.... file size ကတော့6MB ပါ.. အထဲမှာ crack ဖိုင်ပါပါတယ်... လိုအပ်ရင်တော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ ယူလိုက်ပါ....
ကွန်ပျူတာ ထိုးရပ်သွားစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းများ
7:57:00 am ကွန်ပျူတာနည်းပညာ No comments
ကွန်ပျူတာထိုးရပ်သွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများ အနက်ပြသနာတစ်ခုက memory ပါသူ့ပြဿနာကလည်း Blue death screen တက်လာပြီး Fatal Exception Error ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဒီmemoryကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာကလည်း အတော်များများကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။fatal error ဆိုတာက Hardware နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ပြဿနာကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရှိနေပြီဆိုတာကိုညွှန်ပြခြင်းပါပဲ။
တစ်ခါတလေမှာ….လုံးဝသုံးမရတော့ဘဲ အသစ်တစ်ခုအစားထိုးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
ဒါပေမယ့် memory ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ Fatal error ဆိုရင်တော့ chips အချင်းချင်း တွဲဖက်မညီတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥပမာ - 70ns Ram နဲ့ 60ns Ram နှစ်ချောင်းကိုတွဲစိုက်ထားမယ်ဆိုရင်ပိုနှေးတဲ့ 60ns နဲ့ပဲ ကွန်ပျူတာက အလုပ်လုပ်မှာပါပဲ။အဲဒါကိုမှmemory
ကို overworked ဖြစ်စေတဲ့ Program မျိုးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ၊Memory များများသုံးတဲ့ software တွေကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကွန်ပျူတာက….Crash ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။သူမှာက 70ns Ram လည်းရှိနေတော့ အဲဒီအမြန်နှုန်းနဲ့သုံးဖို့ကြိုးစားပါလေရော။ဒါပေမယ့် 60ns Ram ကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါ…ထိုးရပ်သွားတော့တာပေါ့။
ဖြေရှင်းကြည့်ရအောင်။ပထမနည်းလမ်းကတော့ BIOS setting မှာ Ram ရဲ့ Wait state ကိုတိုးပေးထားလို့ရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် memory
ကိုပိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်။နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့……..Motherboard ပေါ်က memory တွေကို နေရာပြောင်းကြည့်ခြင်းပါပဲ။
memoryကိုဖြုတ်တဲ့နေရာမှာ တစ်ခုသတိထားရမှာက၊ ကြေးပြားခြေထောက်အချောင်းလေးတွေကို
မထိမိစေဖို့ပါပဲ။လူမှာရှိတဲ့ Static charge ကြောင့် memory ကိုပျက်စီးစေနိုင်လို့ပါ။အကောင်းဆုံးကတော့……
..မတူညီတဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ Ram နှစ်ခုပြိုင်တူထည့်မထားဖို့ပါပဲ။
ပြဿနာက အပူလွန်ကဲခြင်းပါပဲ။ Software ကိုသာမက Hardwareကိုပါ
ကွန်ပျူတာအတွင်းမှာအလုပ်အများဆုံးလုပ်ဆောင်ရပြီး အပူအများဆုံးထွက်တာ CPU များဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် CPU များမှာ အပူမလွန်ကဲအောင် အအေးခံအတောင်များနဲ့ ပန်ကာများတပ်ဆင်ထားပေးရပါတယ်။
တကယ်လို့ CPU ပန်ကာမလည်တော့ပဲရပ်သွားမယ်ဆိုရင် CPUမှာ အပူလွန်ကဲလာပြီး
Kernel error တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင်ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ ပန်ကာ များနဲ့ အအေးခံ စနစ်ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိကိုချက်ခြင်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။Chipsetများကို ပုံမှန်လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ထက် ပိုခိုင်းပြီး Overclockingလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အပူလွန်ကဲလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာပုံး မှာပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အအေးခံစနစ်မရှိပဲ Overclocking မလုပ်သင့်ပါဘူး။Overclocking လုပ်လိုက်လို့ မီးခိုးထွက်လာတဲ့အထိအပူလွန်ကဲတာကိုကြုံဖူးပါတယ်CPUကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုBIOS setting မှာ CPU internal cache ကို Disableလုပ်ထားခြင်းဖြင့်လည်းဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ ကွန်ပျူတာကိုပိုနှေးသွားစေနိုင်ပေမယ့်တည်ငြိမ်မှုပိုရစေနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကို Crash ဖြစ်စေတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကHard disk
ကိုအသုံးပြုတာကြာလာတဲ့အခါမှာ Hard disk ပေါ်မှာ ဖိုင်တွေနေရာချထားတာရှုပ်ထွေးလာပြီး
မနိုင်ဝန်ပိကာ ကွန်ပျူတာထိုးရပ်သွားစေတာပါပဲ။Hard disk fragmented ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဖြေရှင်းဖို့ရာ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော
့Start>Programs>Accessories>System Tools>Disk Defragmenter
ကနေDisk Defragmenter ကိုဖွင့်ပြီး ဖိုင်တွေကိုအစီစဉ်တကျပြန်စီခြင်းပါပဲ
Defragment လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ Hard disk ပေါ်မှာ ဖိုင်တွေထပ်ရေးခြင်းမလုပ်သင့်ပါဘူးဒါကြောင့်
ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ဘာမှမသုံးတဲ့အချိန်မှာပဲDefragment လုပ်သင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ်သတိထားသင့်တာ တစ်ခုက Antivirus program ကိုလည်း ပိတ်ထားပေးသင့်ပါတယ်။
Hard disk မှာ ထည့်ထားတာ အရမ်းပြည့်လာတဲ့အခါမှာလည်းအလုပ်လုပ်တာနှေးလာပြီး
system ကို crash ဖြစ်စေနိုင်တာပါပဲ။ဒါကြောင့် မလိုအပ်တော့တဲ့ဖိုင်တွေကို အပါတ်စဉ်
ဒါမှမဟုတ် လစဉ် ရှင်းထုတ်ပြီးHard disk မှာ နေရာလွတ်ရှိအောင်ဖန်တီးထားသင့်ပါတယ်။
Temporary files တွေကိုပုံမှန်ရှင်းထားပေးရင်ကို နေရာလွတ်တော်တော်
များများရနိုင်မှာပါ။start>run>%temp% ဆိုရင် Temporary folder
software တစ်ခုတင်တဲ့အချိန်၊ အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ ဖန်တီးထားတဲ့ဖိုင်တွေပါအတော်
များများဖျက်လို့ရပါတယ်။Recycle Bin ကိုလည်းရှင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦး။အမှိုက်ပုံးသွန်ရတာ
ဒါပေမယ့်မဖျက်ခင် အသေအချာစဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်လေ၊ နောင်တမရကြေးပေါ့ဗျာ
Hard disk နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ နောက်တစ်ခုက Hard disk မှာ errors တွေ၊
bad sectors တွေရှိမရှိအနည်းဆုံး တစ်လတစ်ခါလောက်တော့ scan လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Start>All programs>Accessories>System tools>Scan Disk ကိုသွားပြီး
လုပ်လို့ရပါတယ်။တခါတရံမှာ အဲဒီ Start Menu ထဲမှာ Scan Disk မပါဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ Start>Run မှာ chkdsk လို့ရိုက်ပေးလိုက်ပါ။MS-DOS ကနေ Scan လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ်စစ်ချင်တဲ့ Hard disk ရဲ့ Properties
ကိုခေါ်ပြီး Tools tab အောက်မှာ Error-checking ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က Check Now
8:19:00 pm Facebook hacking စာအုပ် No comments
Gmail Account တစ်ခုတည်းနဲ့Facebook Account တွေ အများကြီးဖွင့်ကြမယ်
12:03:00 pm facebook No comments
တကယ်တော့ အားလုံးသိထားကြတာ gmail account တစ်ခုကို facebook account တစ်ခုပဲ ဖွင့်လို့ ရတယ် လို့ ပဲ သိထားကြတယ်။ တဂယ်လဲ facebook က mail တစ်ခုကို account တစ်ခုပဲ ပေးဖွင့်တယ်။
ဘလောဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖမ်းမခံရအောင် ဘယ်လိုဘလောရေးမလဲ
11:59:00 am ဘလောဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ No comments
Cyber နယ်ပယ်မှာ ဘလောဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖမ်းမခံရအောင် ဘယ်လိုဘလောရေးမလဲ။ ဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကတော့ အခုလိုမပွင့်လင်းသေးတော့ ဘလော့ဂါတွေက စာရေးတာကို IP တွေ trace လုပ်လို့မရအောင် ဘာညာဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင်ရေးသားထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်ကနေသာ ဒေါင်းလိုက်တော့ဗျို့။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Blog Address အဟောင်းမှ လိပ်စာအသစ်သို့ Redirect လုပ်နည်း
11:52:00 am Blog Address အဟောင်းမှ လိပ်စာအသစ်သို့ Redirect လုပ်နည်း No comments
ကျွန်တော်ဘလော့စပေါ့လေးကို လိပ်စာအသစ်သို့ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် လိပ်စာအဟောင်းကိုသွားလိုက်တာနဲ့ အခုလိပ်စာအသစ်ဆီကို Redirect လုပ်ပေးမယ့်နည်းလမ်းသုံးထားပါတယ်။ ဘလောဂါတွေအတွက် ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေ
ရှိခဲ့ရင် ခုနည်းလမ်းကမဆိုးပါဘူး။ သူ့ဟာသူ auto Redirect လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ လုပ်ရမှာက လွယ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး မူလဘလောစပေါ့ထဲ Login ဝင်ထားပါ။
Blogger Dashboard ထဲရောက်ရင် Template ကိုရွေးပါ။ အဲဒီကနေတစ်ဆင့် Edit Html ကိုဆက်သွားပါ။ ရောက်ပြီဆိုရင် ဆိုတဲ့စာသားလေးနေရာကိုရှာပါ။ Firefox ကနေ Ctrl+F နဲ့ရှာနိုင်ပါတယ်။ တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ အောက်ကကုဒ်ကို ဆိုတဲ့အောက်နားမှာထည့်ပေးရပါမယ်။
အနီရောင်နဲ့5ဆိုတာက Redirect လုပ်ပေးမယ့်အချိန်ပါ။
http://www.YOUR-URL.com/ မှာ မိမိ Redirect လုပ်ချင်တဲ့လိပ်စာကိုထည့်ပေးရပါမယ်။
ဒါဆိုရင် ရပါပြီ။ Save မလုပ်ခင် Preview ကနေအရင်ဆုံးကြည့်ပါ။ အလုပ်ဖြစ်ရင်တော့ Save လို့ရပါပြီ။ တစ်ခုခုမှားသွားရင် ပြန်ခေါ်လို့ရအောင် မိမိရဲ့ ဘလော့ Template ကို Backup လုပ်ထားပါစေ။
Pastebin Accounts Hacking (Facebook/Paypal/LR/Gmail/Yahoo etc.)
11:27:00 am Hacking No comments
[+] Pastebin Hacking Method [Fast, Simple and Effective]
11:23:00 am Hacking 1 comment
ခုနည်းလေးကတော့ Fb User တွေရဲ့ID ကိုရှာဖွေနည်းပါ.. ခုနည်းက တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ အတော်လေးကို လိုအပ်ပါတယ်.. ဥပမာ ကောင်းကောင်းပေးရရင် FB 0day လေးတစ်ခု မှာပေ့ါ...
ဆို ဒါသူ့profile id လို့ ထင်ပါတယ်..
မပာုတ်ပါဘူး နောက်ကွယ်မှာ ID တစ်ခုရှိနေကြပါ..
ကိုသွားလိုက်ပါ... File not found ဆိုပြီးဖြစ်နေပါမယ်.. အားမငယ်ပါနဲ့ ...
အဲ့လင့်နောက်မှာ သင်သိချင်တဲ့သူ fb link name လေးထည့်ပေးရပါမယ်...
kochartape လို့ ထည့်ပေးလိုက်ပါ... fb.com/kochartape ကနေ kochartape ဆိုတာလေးကို
လို့ ဖြစ်သွားပါပြီ... ဒေါင်းလော့ ချဖို့ ပေးပါမယ်.. ဒေါင်းလော့ရယူပြီး text file လေးနဲ့ ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
ID ကိုမြင်တွေ့ ရမှာပါ...
"name": "Net Char Tape",
"first_name": "Net Char",
FACEBOOK HACKING USING PHISHING
11:03:00 am Hacking 1 comment
'ဒါလေးကတော့ pHISHING နည်းပညာကိုသုံးပြီး Facebook Account များ ကို Hack ခြင်းပါဘဲ.. အလွယ်ပြောရင်တော့ Fake Page (စာမျက်နှာအတု) နဲ့Hack တယ်လို့ ပြောရပါတယ်..
အရင်ဆုံး Facebook.com ကိုသွားလိုက်ပါ..
ပြီးရင် Ctrl+u နိုပ်ပြီး source code တွေကို ကူးပြီး notepad တည်းကိုထည့်လိုက်ပါ။
Facebook Open URL Redirection Vulnerability 2013
10:47:00 am Hacking No comments
Track Who Check My Facebook Profile
10:45:00 am Hacking No comments
ဒါလေးကတော့ ကို Soe Soe (http://www.soesoediary.org/) ကနေ ဆွဲလာတာလေးပါ..
မိုက်တယ်ဗျာ.. မိုက်ချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ဘဲ။... (နောက်တာနော်ကိုကြီး စိတ်မဆိုးနဲ့ )
တကယ် ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးမို့ ကူးလာတာပါ..
5:06:00 am Window XP No comments
အားမငယ်ပါနဲ့ XP ကို ၀င်ဒိုး7ထက်တောင်ပိုမိုက်တယ် အပေါ်ကပြထားတဲ့ပုံကိုကြည့်လေ မိုက်တယ်မဟုတ်လား ဟီးးး ဒီဆော်ဝဲလ်ကိုဒေါင်းယူ ပြီ အသုံးပြုကြည့်ပါ လန်းလန်းထွက်သွားမယ် Folder တွေကအစ အကုန်လုံးပြောင်းလဲ သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်...။။။
5:00:00 am windows Drivers No comments
windows Drivers ကိုတစ်နေရာထဲမှာ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ အမျိုးအစား ကိုအလွယ်တကူ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ ဆိုဒ်တွေ့ထားတယ်ပြန်လည်မျှဝေချင်လို့ဒီပို့စ်ကိုတင်ဖြစ်တာပါ ဒီမှာသွားလိုက်ပါ ..........
4:37:00 am လိဒ် ဂီတာ တီးခတ်နည်း စာအုပ် No comments
ဂီတာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအဆင်ပြေမှာပါ ဒီစာအုပ်လေးကို နှစ်သက်ပါက ဒီမှာ ဒေါင်းယူပါ။။။
4:14:00 am ဖုန်း No comments
အင်္ဂလိပ်မှမြန်မာ မြန်မာမှအင်္ဂလိပ် အရမ်းကောင်းတဲ့ ဒစ်ရှင်နရီလေးပါ။
စက်ရုပ်ဖုန်းသုံးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အသုံးလိုပါက ဒီနေရာလေးမှာ
10:16:00 pm Download No comments
ဖိုင်တွေကို Download လုပ်ရာမှာ အမြန်ဆန်ဆုံး download လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်တဲ့ Internet Download manager v6.11 (Portable version) ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Portable ဖြစ်တဲ့အတွက် Member Stick ထဲမှာ ဒီအတိုင်းထည့်ထားလို့ရပြီး Install မလုပ်ဘဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ သုံးချင်သူများအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Internet Download Manager ( Portable) v 6.11 အားရယူရန်
10:10:00 pm Driver No comments
Download Driver Epson Stylus TX111 & TX110